Tombontsoa ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro: inona izany, karazana ary fatiantoka | Green Renewable
Tombony azo amin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Fantatsika fa ny olombelona dia mampivelatra angovo azo havaozina amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana. Ireo no tsy mandoto ny tontolo iainana ka mamela loharanon-kery tsy manam-petra. Anisan'ny angovo azo havaozina, ny angovo avy amin'ny masoandro dia nanjary manan-danja tokoa tato anatin'ny folo taona sy ny fitomboan'ny fisian'ny olona manerantany. Ary misy maro tombony azo avy amin'ny angovo avy amin'ny masoandro mikasika ireo karazana havaozina hafa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny tombony azo amin'ny angovo avy amin'ny masoandro ary ny maha-zava-dehibe izany ho an'ny ho avy angovo.
1 Inona ny angovo avy amin'ny masoandro
1.1 Angovo thermoelectric
1.2 Angovo Photothermal
1.3 Angovo Solar Photovoltaic
2 Tombony azo amin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Inona ny angovo avy amin'ny masoandro
Raha te hahalala ny tombotsoan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia tsy maintsy fantarintsika hoe inona izany ary inona avy ireo karazana angovo avy amin'ny masoandro. Fantaro aloha hoe inona izany loharano angovo azo havaozina azo amin'ny alàlan'ny masoandro ary izay hafanana sy herinaratra azo amboarina amin'ny karazana fampiasana. Na dia loharano maharitra aza izy io dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy hoe tsy misy ny drawback, misy akony koa ny habeny sy ny fampiasana azy.
Izy io dia nalaina mivantana avy amin'ny taratra izay tonga amin'ny planetantsika avy amin'ny masoandro na amin'ny endrika hazavana, hafanana na taratra ultraviolet. Miankina amin'ny herin'ny masoandro, misy karazany isan-karazany.
Araka ny tondroin'ny anarany dia karazana angovo azo havaozina sy madio izay misy ny fampiasana ny herin'ny masoandro hamokarana herinaratra. Tsy toy ny panneaux solaires ampiasaina amin'ny angovo photovoltaic hamokarana herinaratra avy amin'ny fotona jiro hita amin'ny taratra masoandro, ity angovo ity manararaotra an'io taratra io mba hanafanana rano.
Rehefa mamely ny tsiranoka ny taratry ny masoandro dia manafana azy io ary io rano mafana io dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana isan-karazany. Mba hahazoana hevitra tsara kokoa, Ny 20% amin'ny fandaniana angovo hopitaly, hotely na trano dia mifanaraka amin'ny fampiasana rano mafana. Miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro isika dia afaka manafana ny rano amin'ny herin'ny masoandro ary manararaotra azy ka, amin'ity sehatry ny angovo ity dia tsy mila mampiasa fôsily na angovo hafa isika.
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia mandray anjara betsaka amin'ny fampihenana ny vidiny, miaraka amin'ny tahiry angovo vokar'izany ary fihenan'ny emissions CO2 izay mahatonga ny fiakaran'ny tany ary manetsika ny fiovan'ny toetrandro.
Mampiasa ny hafanana izy noho ireo mpamory masoandro izay mandray taratry ny masoandro ary mamindra azy amin'ny tsiranoka miasa. Izy io dia ampiasaina hanafanana ny tranobe sy ny rano, hampihetsika turbine, maina voa, na handrava ny fako.
Mba hamokarana angovo photovoltaic dia ilaina ny maka ny sarin-jiro misy ny taratra masoandro ary mamadika azy ho herinaratra hampiasana azy. Azo tanterahina izany amin'ny ny fizotry ny fiovan'ny photovoltaic amin'ny alàlan'ny fampiasana tontonana amin'ny masoandro.
Ny tontolon'ny masoandro dia singa lehibe iray sela photovoltaic. Ity dia fitaovana semiconductor (vita amin'ny silicon, ohatra) izay tsy mila faritra mihetsika, tsy misy solika, na miteraka tabataba.
Rehefa miharihary tsy tapaka amin'ny jiro ity sela fotovoltaika ity dia mandray ny angovo voarakitra ao amin'ireo fakàn'ny hazavana ary manampy amin'ny famokarana angovo, mametraka ireo elektrôna izay voafandriky ny saovo elektrika ao anatiny. Rehefa mitranga izany dia miteraka tondra-herinaratra mitohy ny elektrôna voaangona eo ambonin'ny sela fotovoltaika.
Raha vao fantatsika hoe inona ireo karazana herin'ny masoandro isan-karazany, dia ho hitantsika izay tombony azo amin'ny fampiasana an'io karazana angovo io:
Angovo madio tanteraka io manampy hampihena be ny dian-karbaona anao. Noho ny fampiasana azy dia hialantsika ny famokarana entona etona ary tsy mandoto mandritra ny famokarany na mandritra ny fampiasana azy isika. Tsy misy afa-tsy fandotoana madinidinika rehefa mamorona panneaux solaires.
Loharanon-kery azo havaozina sy maharitra amin'ny fotoana maharitra izy io.
Tsy toy ny angovo azo havaozina hafa, Io angovo io dia afaka manafana zavatra.
Tsy mila karazana fitrandrahana fitaovana tsy an-kijanona izy io mba hiasa. Izany dia mahatonga azy io ho angovo tsy dia lafo loatra izay mora kokoa amin'ny laoniny ny mampiasa vola voalohany. Marina fa ny iray amin'ireo olana lehibe nananan'ny angovo azo havaozina hatramin'ny nanombohany dia ny fampiasam-bola voalohany sy ny tahan'ny fiverenany, na dia tsy izany intsony no izy noho ny fivoaran'ny teknolojia. Ny tontonana masoandro dia afaka manana fiainana mahasoa mandritra ny 40 taona.
Ny hazavan'ny masoandro dia tena be dia be ary misy noho izany ny safidy tontonana amin'ny masoandro dia safidy azo atao. Saika ny teboka jeografika rehetra eto an-tany dia afaka mampiasa angovo avy amin'ny masoandro. Zava-dehibe ny manamarika fa ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny angovo avy amin'ny masoandro dia ny tsy mila tariby. Manampy amin'ny fametrahana amin'ny faritra sarotra apetraka amin'ny tariby toy izany izy io.
Tombony iray hafa amin'ny angovo avy amin'ny masoandro ny mampihena ny filàna fampiasana solika fôsily koa manampy amin'ny fitehirizana ny harena voajanahary sy ny fihenan'ny fandotoana ny tontolo iainana.
Toy ny misy tombony sasany amin'ny herin'ny masoandro, dia misy fatiantoka ihany koa isika. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Manana izany fahombiazana somary ambany rehefa manova ny angovo avy amin'ny masoandro ho angovo elektrika. Manodidina ny 25% izany fahombiazana izany. Ny fampandrosoana teknolojia dia mifantoka amin'ny fampitomboana ity fahombiazana ity.
Na dia mandritra ny fotoana maharitra aza dia mety ho lalantsara izany, lafo ny vidiny voalohany ary tsy azon'ny rehetra idirana izy io.
Ilaina amin'ny toerana fametrahana azy lehibe kokoa hahafahana mamokatra bebe kokoa herinaratra. Tokony ho ao an-tsaina fa raha betsaka ny filan'ny angovo dia sarotra kokoa ny mametraka ny takelaka amin'ny masoandro omena ny tsy fisian'ny habaka.
Izy io dia karazana angovo tsy miovaova. Miovaova mandritra ny andro izy io ary tsy misy amin'ny alina. Mandritra ny andro dia miovaova izy noho ny habetsaky ny hazavan'ny masoandro azony.
Ny fahombiazan'ny takelaka dia mihena amin'ny toe-piainana sasany na hafanana sy hamandoana maharitra na miaraka amin'ny rahona sy zavona.
Olana amin'ny herin'ny masoandro koa ny fandotoana. Ary ny any amin'ireo tanàn-dehibe izay manana loto avo amin'ny atmosfera dia ambany kokoa ny fampisehoana.
Mandritra ny famokarana panneaux solaires entona entona mavesatra be dia be no mivoaka ary fako misy poizina. Ity dia fatiantoka iray izay azo averina any aoriana rehefa ampiasaina satria manampy be amin'ny fampihenana ny dian-karbaona.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tombony azo avy amin'ny angovo avy amin'ny masoandro ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Tombony azo amin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Mikarakara ny tontolo iainana